स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही नगरे प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्छः माधव नेपाल (अन्तर्वार्ता) - Image Khabar
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही नगरे प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्छः माधव नेपाल (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : 14 April, 2020 10:29 pm
काठमाडौं, बैशाख २ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही नगरे प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
ईमेज च्यानल टेलिभिजनसँग मंगलबार कुरा गर्दै पूर्वधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिना मोलाहिजा कार्वाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको बारेमा त्यत्रा विषय आएकाले खोजबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र बदमासीको ठहर गरी कार्वाही गर्न माग गर्दै नेता नेपालले कार्वाही नगरी संरक्षण गर्न खोजिए प्रधानमन्त्रीतर्फ नै प्रश्न खडा हुने चेतावनी दिए ।
यत्रा भ्रष्टाचारकाण्डको जिम्मा कसले लिने ? नेकपा पार्टीले कि सरकारले भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता नेपालले भने, ‘कुनै मोलाहिजा र कुनै संरक्षण नगरीकन कार्वाही गर्नुपर्दछ । संरक्षण गर्न थाल्नुभयो भने तपाईमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको कुरा मात्र आएको नभई बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी मोल तिरेर सामान ल्याएको र त्यो पनि गुणस्तर नै नभएको विषयमा तत्काल छानबीन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेता नेपालले भने, ‘जनताले एक एक पैसा जम्मा गरेर, सहयोग गर्ने दाताहरुले दिइरहेका छन् । तलब काटी काटी दिएका छन् । खर्च बचाएर दिइरहेका छन् । एक एक पैसाको ठूलो महत्व हुन्छ । यस्तो बेलामा कुनै व्यापारीले पनि ठग्ने काम नगर्नुहोस् । जनतालाई यस्तो दुःख दिने, सताउने काम नगर्नु होला ?’
सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नेता नेपालले यस्तो बेला नाजायज काम गर्नेहरु सल्बलाउन सक्ने र राम्रो काम गरे मात्र जनताको समर्थन पाउने भएकाले गुनासा नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
नेता नेपालले अगाडि थपे, ‘नराम्रो काम गरे समर्थन गुम्छ । भ्रष्टाचारजन्य कामहरु नहोस् । यसबारेमा कम्प्लेनहरु आएका छन् । भाउ बढाएको, कुहिएको सामान दिएको, थोरै सामान दिँ हुनेमा पनि नगरेका कुरा आएको छ । मिठो बोली प्रयोग नगरेको गुनासाहरु आएका छन् ।’
पार्टीको बैठकमा पनि सरकारले गरेका कामको कमीकमजोरीबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले गल्ती गर्नेलाई कुनै बहानामा नछाड्न र अनुचित काम गर्नेलाई दण्ड सजायँ दिन भनेको बताए ।
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेको सर्वदलीय संयन्त्र र प्रधानमन्त्रीले उक्त सयन्त्र अस्वीकार गरेका सन्दर्भमा उनले संयन्त्र बनाए पनि नबनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबैको सहयोग लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनले नेताहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नलिन, आक्रोशित नहुन र गिल्ला नगर्न आग्रह गरे ।
प्रस्तुत छ, ईमेज च्यानल टेलिभिजनका लागि सुरेश शर्माले नेता नेपालसँग लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंशहरुः
प्रश्नः दिनहरु कसरी बितिरहेको छ ?
नेपालः पुस्तक, कागजपत्र मिलाउने, नेपालको अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासका चुनौति के ? समाधान के हुनसक्छ भन्नेबारे चिन्तन गर्ने खालका पुस्तक अध्ययन गर्न लागिरहेको छु । यो कोरोनाबाट सबैतिर आक्रान्त छ । यो मानव जातिकै लागि संकट बनेर आएको छ । संयमताका साथ, सावधानी अपनाएर, बन्दोबस्त गरेर सामना गर्नुपर्ने जरुरी छ । उपचार, खानपिनको प्रबन्ध गरेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समयमा मानिसहरुले पढ्न, रचना गर्न, खेतिपातीको काम गर्ने, परिवारसँग बसेर बिताउने सक्नेछन् । यसबारे धेरै चिन्ता नलिन आग्रह गर्दछु । हिक्मत, साहस, सावधानीका साथ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नः सरकारले गरेको राम्रा र नराम्रा काम के के छन् ?
नेपालः सरकारका कमिकमजोरी केलाउने समय होइन यो । आत्मचिन्तन गर्ने समय हो । अरु दलले बनाएका सरकारको, नेकपाकै नेताहरुको नेतृत्वमा बनेका सरकारका अलग अलग अनुभवहरु छन् । त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रश्नः प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ ?
नेपालः दिएको छैन । अध्ययन गरिरहेको छु । चीन, कोरिया, भारत, लगायतको अनुभव अध्ययन गर्दैछु । अरुको दोषमात्रै खोज्नेभन्दा पनि राम्रा र समाधानको पक्ष पनि खोज्नु पर्दछ ।
प्रश्नः अध्ययन कहिले सकिन्छ, सुझाव कहिले दिनुहुन्छ ?
नेपालः सुझाव दिन होइन अध्ययनका लागि मात्रै हो । अध्ययनको निचोड लेख, भाषण, पुस्तक, गोष्ठीहरुमा आउँछ । विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएको विषयहरुलाई पनि समेट्दै छु ।
प्रश्नः यस्तो बेलामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ला नि ?
नेपालः सुझाव दिन सकिन्छ । सुझाव चाहे न दिने हो । नखोजेको सुझाव दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रश्नः त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुमधुर छैन कि क्या हो ?
नेपालः कसले भन्यो सुमधुर छैन भनेर ? कतिको अरुले मागोस् नमागोस् सल्लाह दिने चलन स्वभाव हुन्छ । अरु देशले पनि सल्लाहकारको पगरी भिरेर सल्लाह दिन खोज्छन् । तर यस्ता सल्लाह कतिलाई सहज नलाग्न सक्छ । ओली त्यस्तो हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन । पहिले आफू प्रष्ट हुनुपर्यो, सबैको राय सुझावलाई अवधारणा बनाएर, निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो । अरुलाई पनि सहमत गर्न सके, प्रधानमन्त्री, सरकारका मानिसहरुलाई राम्रो लाग्यो भने न ठीक हो । तब न राम्रो हुन्छ । देशको जनताका लागि राम्रो हुन्छ ।
प्रश्नः तपाईको सुझावले त यो महामारीबाट पार पाउन सजिलो हुन्थ्यो होला नि त ?
नेपालः सुझाव दिइरहेको छु । प्रदेश, स्थानीय तहसम्म राहत दिनेबारेमा, तथ्यांक बनाएर दिने भन्नेबारेमा सुझाव दिइएको थियो ।
प्रश्नः अनि सुझावको सुनुवाई भयो त ?
नेपालः सुनुवाई भएको पनि छ । सकारात्मक रुपमा लिएसम्म दिने हो । भन्ने हो । कस्ता सुझाव दिइयो, के कुरा भए ? दुई पक्षबीचका कुराहरु भन्दै हिड्ने मानिस होइन म । तीतो कुरा खोतल्न लागेको होला । मेरो मुखबाट तीतो कुरा आउँदैन । अपेक्षा नगर्नु ।
प्रश्नः दुई कार्यकारीबीचमा तपाईं त मध्यमार्गीको भूमिकामा हुनुहुन्छ नि ? कसरी निभाइरहनु भएको छ ?
नेपालः सबैको भूमिका आवश्यक छ । सबैको योगदानबाट पार्टी आन्दोलन यहाँसम्म पुगेको हो । समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्ने पनि सामूकि रुपमै हो ।
प्रश्नः पार्टी र सरकारले संयुक्त रुपमा काम गरेको छ कि ? अलग अलग हिंडेको छ ?
नेपालः यो अवस्था अरु बेलाभन्दा फरक हो । सामाजिक दूरी कायम गर्न खोजिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा पार्टीका सबै निकाय परिचालन सम्भव हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नै परिचालन गर्ने हो । समाजसेवी, सहयोगीहरुको सानो टीम बनाएर परिचालन गर्नुपर्दछ । मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ ।
प्रश्नः सरकारले तपाईले भनेअनुसार नै काम गरेको छ त ?
नेपालः म काठमाडौं २ बाट निर्वाचित हुँ । रौतहटको भएकोले त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्नेमा बुझिरहेको छु । यस्तो बेला नाजायज काम गर्नेहरु सल्बलाउन सक्छन् । राम्रो काम गर्यो भने मात्र जनताको समर्थन पाउँछौं । नराम्रो काम गरे समर्थन गुम्छ । भ्रष्टाचारजन्य कामहरु नहोस् । यस्ताबारेमा कम्प्लेनहरु आएका छन् । भाउ बढाएको, कुहिएको सामान दिएको, थोरै सामान दिए हुनेमा पनि नगरेका कुरा आएको, मिठो बोली प्रयोग नगरेको गुनासाहरु आएका छन् ।
प्रश्नः अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा तपाईले पनि सुनिरहनु त भएको छ नि ? साँच्चै के भइरहेको छ ?
नेपालः होइन त्यत्रा कुराहरु आइरहेका छन् । कयौं गुणा बढी मोल तिरेर सामान ल्याएको, गुणस्तर नै नभएको सामान ल्याएको कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । छानबीनको विषय हो नै । जनताले एक एक पैसा जम्मा गरेर, सहयोग गर्ने दाताहरुले दिइरहेका छन् । तलब काटी काटी दिएका छन् । खर्च बचाएर दिइरहेका छन् । एक एक पैसाको ठूलो महत्व हुन्छ । यस्तो बेलामा कुनै व्यापारीले पनि ठग्ने काम नगर्नुहोस् । जनतालाई यस्तो दुःख दिने, सताउने काम नगर्नु होला ?
प्रश्नः भ्रष्टाचार भइरहेको विषयको जिम्मा कसले लिने ? नेकपा पार्टीले लिने कि सरकारले ?
नेपालः जहाँबाट भएको छ खोजबीन पहिले गर्नु पर्यो । सत्यतथ्य के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । बदमासी भएको छ भने ठहर गरी कार्वाही गर्नुपर्यो । कुनै मोलाहिजा नगरिकन । कुनै संरक्षण नगरिकन । कसैगरी संरक्षण गर्न थाल्नुभयो भने तपाई माथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले त संरक्षण गर्ने कुरा गर्नु भयो क्यारे नि ? संबोधनका क्रममा ।
नेपालः उक्त सम्बोधन मैले सुन्न पाएको छैन ।
प्रश्नः तपाईको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्न ? सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुन्न ? पटक पटक भइरहेको छ क्या रे ?
नेपालः अँ एक पटक उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै यस्तो बैठक भएको थियो । कोरोना भाइरस सम्बन्धि संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्नेबारेमा ।
प्रश्नः पार्टीकै बैठक पनि त बसेको थियो क्यारे नि ?
नेपालः हाम्रो बैठकमा पनि विभिन्न विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छौ । भ्रष्टाचारको कुरा होस् वा व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा होस् । राम्रो छानबीन गर्नुपर्दछ । अनुचित काम गर्नेलाई दण्ड सजायँ दिनै पर्दछ भनेका छौं ।
प्रश्नः के भन्नुभयो त, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा ?
नेपालः प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्नेमा नजाऔं । विषयहरु गम्भीरताका साथ उठेको छ । बैठकमा उठेका विषयमा अवश्य पनि कार्वाही हुनेछ ।
प्रश्नः प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा तपाईंको धारणा के ?
नेपालः उप्रधानमन्त्रीले पनि सुझाव लिएकै होलान् । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ छैन । तर लिनुपर्दछ । संयन्त्र बनाए पनि नबनाए पनि सबैको सहयोग लिनुपर्दछ । त्यसले नै राष्ट्रिय क्षमता र शक्ति बलियो हुन्छ । सहयोग लिने विषयमा एक हुनुपर्दछ ।
प्रश्नः त्यसो भए यो विषयमा तपाई र प्रचण्डको मत मिलेको बुझौं ?
नेपालः हैन, सबैको कुरा मिलेकै छ नि । यो सानो कुरामा प्रचण्डले एकातिर सोच्नुभयो भन्ने अनि केपी ओलीले अर्कोतिर सोच्नुभयो भन्ने, माधव नेपालले यसको पक्ष लियो भन्ने यस्ता कुरामा नलागौं । यस्ता साना कुरामा प्रवेश गर्ने होइन । अहिले त महामारीको सामना कसरी गर्ने भन्ने हो ? हाम्रा कामका त्रुटी कहाँ छन् । कसरी सच्याउने हो ? जनतालाई कसरी सेवा दिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ ।
प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले यो संयन्त्र चाहिँदैन । सरकारले जे गरिरहेको छ ठीक छ भन्नुभाथ्यो त्यही भएकाले यो प्रश्न गरेको हो ।
नेपालः यस्तोमा हामीले धेरै बोल्ने होइन । बसेर छलफल गर्नुपर्दछ । पार्टीका कुनै नेताले कुनै कुरा उठाउनु हुन्छ भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छैन । त्यसबाट आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । गिल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बरु बोलाएर उनको तर्क सुन्ने । तथ्य र तर्क सुन्नु पर्यो । प्रमाण प्रस्तुत गर्ने । चित्त बुझाउनु पर्दछ । नबुझाउने कुरा हुन्छ र ?
प्रश्नः प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु, भन्नुभाथ्यो । उहाँहरुबीच खुलेर कुरा हुन नसकेको देखिन्थ्यो । तपाईको कुनै भूमिका हुन्छ कि दुई नेताकाबीचमा कुरा गराउन ?
नेपालः अहिलेको अवस्था विशेष अवस्था हो । सहज ढंगले भेट्न सक्ने अवस्था छैन । डरमर्दो छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा सतर्कता जनाउनु जरुरी छ । हामी जस्ता मान्छेहरु जो ६० नाघिसकेको छ, उमेर भएका मानिसले झन् सतर्क रहनु पर्दछ । यस्तो समयमा पर्याप्त समय दिएर छलफल गर्ने काम गर्न सकिँदैन । फोनबाट गर्ने । भेटघाट ज्यादा गर्न सकिँदेन । यस्ता कुरामा बढी समय बिताउने कि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जाने हो ? डेलिभरीमा ध्यान दिने हो ?
प्रश्नः यो छलफलले त डेलिभरीलाई नै सहयोग पुर्याउँदथ्यो होला नि ?
नेपालः पुर्याउँदछ । छलफल बहसले कुनै घाटा लगाउँदैन । त्यो छलफल बहसका बारेमा सबैमा आश्यकता महशूस हुनुपर्यो ।
प्रश्नः यस्तोमा तपाईको भूमिका ठूलो हुन्छ नि ?
नेपालः यस्तो बेलामा त्यस्तो सहयोग कमै हुन्छ । कोरोनाको संक्रमण हुन नदिनका लागि नै बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उहाँहरुको समय धेरै लिनुहुन्न । मेरो मात्रै होइन । सबै नेताको भूमिका ठूलो छ नि । हामी नेताहरुको भूमिका नभएर अरुबाट आशा हुने कुरा त भएन नि । विश्वास र समझदारी हुनुपर्दछ । विधि पद्धति प्रक्रियामा जोड दिऔ । विश्वासलाई दरिलो बनाऔं । सुझाव सल्लाह ग्रहण गरौं । अरुका कुरा पनि सुनौं । पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्यो । अपारदर्शी काम नहोस् । एक्लैले काम गर्यो भने शंका हुन्छ । दालमाथि कालो छ भनेर । दायरा कति गर्न सकिन्छ भन्ने बनाऔं । कामको जिम्मा सानो सानो कमिटीलाई दिउ ।
प्रश्नः तपाईलाई कुनै भूमिका दिइएको छ त ?
नेपालः हाम्रो भूमिका त छँदै छ नि ।
प्रश्नः तोकिएरै कुनै भूमिका तपाईलाई दिइएको छ ?
नेपालः तोकिएर त दिएको छैन । सांसदका रुपमा हाम्रा जिम्मेवारी । पार्टी नेताको रुपमा जिम्मेवारी छ । मानव भएर हुने भूमिका पनि होला ।
प्रश्नः प्रचण्डलाई कुनै भूमिका दिइएको छ ?
नेपालः उहाँलाई पनि यस्तै होला ?
प्रश्नः यो महामारीका सन्दर्भमा सरकार र दललाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपालः दलहरुलाई आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई त्यहाँको स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सेवा कार्यमा काम गर्न आग्रह गर्दछु । उपचार नपाएका, संक्रमण भएकाहरुको, चेतना जगाउने, राहत दिने विषयमा सबेको ध्यान जाओस् । अस्पतालको विषय, क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको उपचार, नियमित विरामीलाई उपचारको सन्दर्भ छ । सुत्केरी महिला, बालबालिकाको, विपन्नका समस्याको प्रबन्ध गर्ने हो कि त्यसमा पार्टी नेता, कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्दछ ।
प्रश्नः सरकारलाई के सुझाव छ ?
नेपालः सरकारले त सबैकाम गर्न पर्यो । सरकारी च्यानलबाट काम गर्नुको साथसाथै गैरसरकारी, राजनीतिक च्यानलहरुको पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ । ब्यूरोक्रेटिक च्यानल मात्र होइन, अरु च्यानल पनि हुन्छन्, सोसल च्यानल हुन्छन्, मिडियालगायतमा ध्यान जानु पर्यो । सूचना लिन पर्यो । ल्याप्सेस, कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्यो, कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्यो ।
प्रश्नः सेनालाई भूमिका दिन खोजिएको बारेमा नि ?
नेपालः सेनालाई व्यापारीक भूमिका दिने कुरा उचित होइन । सरकारले नै जीटूजी वा अरु कुनै माध्यमबाट सामान ल्याउनु पर्यो । तर यस्तो बेला सेनाको सहयोग लिनै पर्दछ । सेना, सशस्त्र, प्रहरीको अस्पताल पनि छ, त्यसको माध्यमबाट, सुरक्षाको माध्यमबाट सहयोग लिने हो । तर उनीहरुलाई सीमित दायरामा राख्नु पर्दछ ।
प्रश्नः स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई जिम्मा दिँदा नागरिक प्रशासन कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन ?
नेपालः यसरी दिएकामा मलाई उपयुक्त लागेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा जीटूजीबाट गर्ने हो । चीनसँग कुरा गरिरहेका छौं । अरु देशसँग पनि गरिरहेका छौं भन्नुभयो । सेनालाई नै सबै कुराहरु दिएको जस्तो लागेन । तर फेरि अनेक कुरा आएका छन् । अलिक कन्फ्यूजिङ कुराहरु पनि छन् ।
प्रश्नः सरकारले गरेको भ्रष्टाचारलाई लुकाउन सेनालाई दिइएको भन्ने पनि छ नि त ?
नेपालः अस्ती भएका भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न त्यही व्यक्तिहरुलाई सघाउन अर्को बाटो अपनाउन खोजिएको भन्ने आशंकाहरु आएका छन् । यी सबै कुरालाई निवारण हुने गरी काम गर्नुपर्दछ ।
प्रश्नः सरकारले परराष्ट्र मामलामा खेलेको भूमिका कस्तो लागेको छ ?
नेपालः परराष्ट्र, रक्षामन्त्रालय सम्हालेर काम गरिसकेकाले मलाई यि दुबैको विषयमा राम्रो जानकारी छ । अहिले सरकारले भारत, चीनबाट आश्वासन, प्रतिवद्धता पाउनु राम्रो कुरा हो । लागिरहनु पर्दछ । राजदूतहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्यो । सामग्री छिटो ल्याउनु पर्दछ । दुई पक्षकाबीचमा कुरा गरेर टुंग्याउनु पर्दछ ।
प्रश्नः सरकारको चीन र भारतप्रतिको भूमिका सन्तुलित छ ?
नेपालः प्रधानमन्त्री आफैले मोदीजीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । अरु देशका नेताहरुसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ । विभिन्न माधयमबाट विचार आदानप्रदान भएका होलान् । नेपालीहरु जुन देशमा बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई त्यही देशमा सुरक्षित कसरी राख्ने ? संक्रमित छ भने उसको उपचार कसरी गर्ने ? खानपिनको बन्दोबस्त कसरी गर्ने नेपालीका बारेमा चासो राख्नुपर्दछ । प्रयत्न गरिहेको छ । कमजोरी भए सुधाररेर अगाडी जानु पर्दछ ।
प्रश्नः अबको अर्थतन्त्र कस्तो देख्नु भएको छ ? अब कसरी जानपर्दछ ?
नेपालः अहिलेसम्मको बाटो पूरै छाड्ने भन्ने बहस चलेको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । संकीर्ण राष्ट्रवादतर्फ बढ्ने छ भन्ने छ । अर्को कोणबाट मानव जाति सामु ठूलो समस्या बनेकाले मिलेरै समाधान खोज्नुपर्दछ भन्ने पनि छ । यस्ता समस्याहरुको मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
हेर्नुस् भिडियो अन्तर्वार्ताः
लेबनानमा एक गोदाममा विष्फोट हुँदा ७० जनाको मृत्यु, चार हजार वढी घाइते
बिचौलिया दाजुभाइको अस्वभाविक पहुँच: जसले नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चाइरहेका छन्
मंगलबार १२ सय नेपाली स्वदेश फर्किए
आमरण अनशनमा बैतडीका तीन युवा
लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित भेटिएपछि काठमाडौं उपत्यका थप जोखिममा (भिडियो)
काठमाडौं, साउन ११ । काठमाडौ उपत्यकामा साउन महिना सुरु भएसँगै देखिएका कोरोना संक्रमितमध्ये धेरै जनामा
नेपाल–भारतबीच वार्ता गराउन कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ: डा. कोइराला (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला सरकारले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सापछि नेपाल
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गर्नु कर्कश धुन बजाउनु जस्तैः प्रधानमन्त्री ओली
लकडाउन सरकारलाई होइन, जनताको जीवनका लागि स् प्रम ओली कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट
भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन् : ऊर्जामन्त्री (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं, चैत २९ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको छ । सोहीक्रममा नागरिकलाई
चाँडै सर्वदलीय संरचना निर्माण गरौं, सबैको एकताले मात्र कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्न सकिन्छः अध्यक्ष दाहाल (पूर्ण अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं, चैत्र २८ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित बढेकाले ‘लकडाउन’ थप सशक्त हुनेछ : मुख्यमन्त्री भट्ट (अन्तर्वार्ता)
धनगढी, चैत २४ । नेपालमा पुष्टि भएका ‘कोभिड–१९’ का नौ संक्रमितमध्ये चार सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन्